उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानी पु¥याउन सबैको ध्यान जानुप¥यो : डिभिजन प्रमुख हुसेन – Sidha Patra
सीधापत्र,प्युठान। आइतबार, फाल्गुण २५, २०७६
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा मौलिक हकको रुपमा खानेपानी सुविधा उपलव्ध गराउने भनिएको छ । सरकारले खानेपानीलाई मौलिक हककै रुपमा संविधानमा राखे पनि व्यवहारमा अझै करिव १५ प्रतिशत प्यूठानवासीहरु खानेपानीको सहज पहुँचबाट टाढा छन् । त्यसो त शुद्ध पानीको पहुँचबाट त्यो भन्दा धेरै प्यूठानवासी बञ्चित छन् । मानव जीवनको पानीको महत्व ज्यादै छ । पानी विना जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । खानेपानीको सहज सुविधाले मानिसको दैनिकी सहज मात्र बनाउँदैन स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । शुद्ध पानी पिउन सकेमा पानीजन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ । तीन तहकै सरकारहरु खानेपानीको समस्या समाधानको लागि क्रियाशील रहेको अवस्था छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश ५ सरकारले ३ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र सबैलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने योजना अगाडि बढाएको छ । प्रदेश मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्यूठानले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका गतिविधिका बारेमा डिभिजन प्रमुख आविद हुसेनसँग यस प्युठानका अग्रज पत्रकार सञ्जय रिजालले गरेको कुराकानी ।
खानेपानी भनेको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । अहिले प्यूठान जिल्लाको खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
खानेपानीको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने ८५ प्रतिशतभन्दा माथि आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच छ । खानेपानीको गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । आधारभूत स्तर, मध्यमस्तर र उच्च स्तर मध्यम र उच्च स्तको पिउने पानीको पहुँचमा धेरै पछाडि छ । तर आधारभूत स्तरको ८५ प्रतिशतभन्दा बढि रहेको छ । अर्को समस्या के छ भने पहाडी जिल्लामा खानेपानीका मुल सुक्नाले ग्रयाभिटी फलोका योजनाहरु नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वैकल्पिक रुपमा अहिले लिफ्ट योजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लामा अहिले करिव ६१ वटा योजनामध्ये करिव आधा भन्दा बढि पम्पिङ्ग प्रोजेक्टहरु छन् । यस किसिमका योजनाहरु सञ्चालन गर्न महाजटिलता हुने रहेछ । यसमा इञ्जिनियरिङ्ग फिल्डका तीन विधा जानेकाले त्यो आयोजना चलाउन सक्ने रहेछ । सिभिल पार्ट हेर्नलाई सिभिल इञ्जिनियर, हामी सेनेटरी इञ्जिनियर हुन्छौं र इलेक्ट्रो मेकानिकल पार्ट भनेको पम्पहरु हुन्छ । प्यानल बोर्ड, हुन्छ भने अर्को महत्वपूर्ण पार्ट हुन्छ – विद्युतीकरण । त्यो इलेक्ट्रीकल इञ्जिनियरले गर्ने हो तथापि भोगाइका आधारमा,अनुभवका आधारमा हामीले यो तीनवटै समेटेर पम्पिङ्ग सिस्टमका योजनाहरु चलाइरहेका छौं । म यो जिल्लामा आएदेखि तत्कालीन समयमा बनेका केही सम्पवेल दुरावस्थामा थिए ।
खोलाको बेड तिरबाट अण्डरग्राउण्ड बगिरहेको पानीलाई इनारमा जम्मा गरेर त्यसलाई पम्प गरेर मूल रिजर्भवायर टंकीमा पठाएर ग्रयाभिटी वितरणको लागि बनाउने गरिन्छ । ठेट नेपालीमा भन्दा इनार भनौ । केही सम्पवेलको दुरावस्था थियो । खैराका दुई वटा सम्पवेल बिग्रीएको अवस्थामा थियो भने पूmलघाटको पनि विग्रिएको अवस्था थियो । सबैभन्दा रोचक कुरा के हो भने स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको ५ र ८ को लागि बेलवास खानेपानी योजना बनाउँदै गरेको सम्पवेल पुरिएर घाँस उम्रिएको अवस्था थियो । म आइसकेपछि दुई महिनाको दौरानमा यी चारवटा सम्पवेललाई अगाडि बढाउने हिसावले काम गरे ।
काम गर्ने मान्छेको प्राविधिक दक्षता नभएर वा प्राविधिक ज्ञानको कमीको कारणले । बीस वर्ष अगाडि हाम्रा इञ्जिनियर साथीभाइहरुले अहिलेसम्म त्यही अनुशरण गर्दै आइरहेको र आप्mनो अनुभव खोजेर लागू गर्न नसकेका कारणले त्यस्तो अवस्था देखियो । प्यूठान नगरपालिकाले टिकुरीमा सम्पवेल बनाउँदै थियो उहाँहरुको पनि त्यही अवस्था हुन्थ्यो । त्यसलाई मैले नै सच्याइदिएको हो । अहिले राम्रो अवस्थाको बनेको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा तीनवटै सरकारबाट काम भइरहेको छ । अहिले तीनै सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको क्षेत्र पनि हो यो । खानेपानीको योजनाहरु धमाधम निर्माण पनि भइरहेका छन् ।
योजना निर्माण क्रममा समन्वय कस्तो छ ?
भर्खर देशमा नयाँ संविधान आएर संघीयता लागू भएको छ । संघीयता अनुसार तीन तहका सरकारहरु छन् । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीनै तहले आ–आफ्नो किसिमले कामहरु अगाडि बढाएको अवस्था छ । हिजोको दिनमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेश अन्तर्गत आएर साविकका आयोजन संघबाट हस्तान्तरण भएर आएको अवस्था हो । साथै प्रदेश सरकारले पनि केही आयोजनाहरु गत आव देखि सर्भे गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै गरी प्रदेशबाट सशर्त अनुदान, समानीकरण बजेट पनि स्थानीय तहमा आएको छ र त्यो बजेट खानेपानीको नाममा पनि आएको छ । तर यहाँ समस्या के देखियो भने खानेपानी कार्यालयसँग क्रमागत रहेका खानेपानी आयोजनामा पनि स्थानीय तहले बजेट माग ग¥यो । अब त्यो बजेट उहाँहरुले माग्दाखेरी साल बसाली हिसावले आउने एक वर्ष आयो अर्को वर्ष बजेट आउने नआउने टुंगो नहुने । त्यस्तो किसिमले योजना अलपत्र हुने अवस्था थियो । तर म यहाँ आएदेखि नौवटै तहसँग समन्वय गरी हामीसँग भएको योजनामा यदि स्थानीय तहमा बजेट आए छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने खानेपानी स्थनीय तह र उपभोक्ता समिति त्रिपक्षीय सम्झौताहरु गरेर आ–आप्mनो कुन कुन पार्टको काम गर्ने हो त्यसरी काम गरेर आखिर जनतालाई लाभान्वित गराउने हो । त्यो किसिमले काम भएको छ । तर यस्तो प्रक्रिया रह्यो भने भोलिको दिनमा समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।
स्थानीय तहको पनि के गुनासो छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट क्रमागत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा अलि ढिलो हुन्छ । तर स्थानीय तहको चाहना जतिसक्दो छिटो वासिन्दालाई पानीको सुविधा दिने भन्ने हुन्छ । आयोजना निर्माण अलि ढिलो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नी ?
यो हिजोको दिनको गुनासो हो । अहिले तपाई आफै भनिहाल्नुभयो प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा जनतालाई पानी खुवाउने । प्रदेश सरकार अहिले यो विषयमा सजग छ । आप्mना डिभिजन मार्फत बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कञ्जुस्याई गरेको छैन । हिजोको दिनमा संघीय सरकारबाट भइराखेको बेला भन्दा अहिले बजेट बढेर आएको छ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसले गर्दाखेरी कामै भएन भन्ने होइन । तर भरखर प्रदेश सरकारको कार्यालय खुलेका नयाँ ठाउँहरु भएको कारणले यदाकदा कुनै ठाउँमा ढिलोचाडो भयो होला । नत्रभने हामीले त दुई चरणको नया थप बजेट लिएर पनि काम शुरु गरेका छौं यो आर्थिक वर्षमा ।
विभागमा छुट्टै एनएमआईपी शाखा नै छ । त्यो शाखाको काम के हो भने हाम्रा जति पनि आयोजनाहरु छन् । ती आयोजनाहरुको अवस्था कस्तो छ ? सञ्चालनको अवस्था के छ ? पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छ कि आंशिक रुपमा सञ्चालन छ । बन्दको अवस्था छ कि । कि पुनः मर्मत गरेरसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ त्यो चार क्षेत्रमा अध्ययन गरेको छ । त्यो अध्ययनबाट विगत १० वर्ष अगाडिका कुरा गर्दाखेरी करिव ३३ प्रतिशत हाम्रा आयोजनाहरु सञ्चालनमा थिएनन् । सामान्य मर्मत गरेर वा ठूलो मर्मत गरेर केही योजनाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई वर्ष अगाडिको तथ्यांक अनुसार २५ प्रतिशत त्यस्ता योजनाहरु छन् जुन आंशिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । त्यसलाई प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार सबैले मर्मत गर्न सक्यौ भने त्यो पनि सञ्चालन हुन्छ । अर्को विडम्वना के छ भने पानीको मुहानलाई वेवास्था गरी अनियन्त्रीत रुपमा बाटो उत्खनन्ले गर्दाखेरी मुहानहरु सुक्ने दवेर तल जाने अवस्थाले गर्दा पनि समस्या निम्तेको छ ।
अहिले पम्पिङ प्रणालीबाट सम्पवेल बनाउँदाखेरी प्रायः हामीले फिल्टर पनि राखेका छौं । त्यो पानी फिल्टर भएर जान्छ त्यसले गर्दा खेरी गुणस्तरमा अहिले सुधार हुँदै आएको छ । तर अब सत्प्रतिशत नेपाल स्ट्याण्डर्ड २००५ त्यो अनुसार हो होइन भनेर बेला बेलामा पानीको गुणस्तर प्यारामिटर जाँच गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं । त्यो किसिमको कामहरु पनि शुरु भएको छ । गत वर्ष हामीले १५–२० वटा योजनाहरुको सेम्पल लिएर जाँच ग¥यौं । तीमध्ये २÷४ वटामा समस्या थियो । इक्वली देखियो । अरुमा राम्रै थियो । इक्वेली देखिएको ठाउँमा हामीले उपचारको लागि त्यहाँ विलिचिङ्ग पाउडरहरु, ह्याण्डवासिङ्गका कुराहरु, मूल सरसफाइदेखि ट्यांकी सरसफाइका कुराहरु गरेर जनचेतना विकासको कुराहरु अब केही मात्रामा गरिएको छ । अबका दिनहरुमा मुख्य ध्यान के हुनुप¥योभने पानी पु¥याउनु ठूलो कुरा होइन । गुणस्तरीय पानी पु¥याउन सबैको ध्यान जानुप¥यो यसबाट आम उपभोक्ताको पानीजन्य रोगबाट हुने क्षतीलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
यो पनि एनएमआइपीको तथ्यांक हो । यो सर्भे गरेर ल्याइएको हो ।एकदमै अग्लो ठाउँहरु स्वर्गद्धारी, तिराम जहाँ ग्रयाभिटी फलोको रुपमा पानी ल्याउनको लागि पानीको स्रोत छैन । त्यस्तो ठाउँमा वर्षातको पानी संकलन गर्न घैटे पोखरी पनि निर्माण गरिएका छन् ।